Inhlangano ikhathazekile ngenkinga yamanzi kuma-ward | News24
Inhlangano ikhathazekile ngenkinga yamanzi kuma-ward
INHLANGANO ebhekelele ezemvelo i-Green Network ithi ikhathazekile ngenkinga yamanzi eqhubeka ezingxenyeni zezindawo ezingaphansi kuka-ward 4 kanye no-ward 5.
Izindawo ezithikamezekile kakhulu kubalwa kuzona KwaMnyandu, e-Henley Dam kanye neSnathing.
Inkinga yamanzi kulezi zindawo kuthiwa seyiqede iminyaka emine (4) ikhona. Kuthiwa kuphela kuphela isonto lonke amanzi engekho, kwesinye isikhathi abuye isikhashana ngezikhathi zasemini abantu bengekho besemisebenzini bathi babuya emsebenzini engasekho.
Umphakathi wakulezi zindawo ususizwa amaloli athwala amanzi nawo abuye engafiki kwezinye izingxenye zalezi zindawo.
UMnuz Nkanyiso Khumalo we-Green Network uthi sekukaningi beyibuka le nkinga iqhubeka kulezi zindawo kodwa kungekho okwenzekayo.
Uthe kunokuba isimo sibe ngcono ubona sifuna ukuphuma esandleni.
“Eminyakeni embalwa edlule ngesikhathi kunesomiso bekuzwakala ukuthi mhlawumbe yisona esenza kungabikhona amanzi kodwa manje asazi ukuthi yini edala ukuthi abantu bancishwe amanzi. Njengabantu ababhekelele ezemvelo kusiphatha kabi ukubona abantu bengayitholi into ebaluleleke njengamanzi. Le miphakathi ayitholi ngisho isexwayiso sokuthi amanzi abo azovalwa ukuze bezozihlinzeka ngokuthi bawakhe bawagcine emabhakedeni. Abantu banelungelo lokuthola amanzi kanti kungumsebenzi kamasipala ukuthi ubahlinzeke ngezidingo zabo,” kubeka yena .
UMnuz Khumalo uthe basola ukuthi ukuvalwa kwamanzi kulezi zindawo kuhlangene nezimpi zepolotiki eziqhubeka ngaphakathi kulo masipala.
“Okusididayo wukuthi lapho kuhlala ngakhona iMeya kanye nekhansela akhona amanzi ayaphuma kodwa kwezinye izindawo awaphumi ekubeni bengaphansi kuka-ward 4 no-ward 5. Uma bekwazi ukuthi bawavule lapho kuhlala ngakhona iMeya sinesiqiniseko sokuthi bangakwazi ukuwavula nalapho kuhlala khona amanye amalungu omphakathi. Sekuyisikhathi sokuthi umphakathi uhlinzekwe ngezidingo zawo,” kubeka yena.
Umphakathi wakule ndawo uthi usukhathele ukuthutha amanzi emalolini athwala amanzi ngoba kwesinye isikhathi basuke bengekho emakhaya.
“Abanye bethu bayasebenza sibuya ntambama sishiye amakhaya kungekho muntu. Uma kufika iloli elithutha amanzi ubani ozokukhelela wena ngoba uma ungekho kusho ukuthi usele angeke lize libuyele wena wedwa ntambama futhi ngosuku olulandelayo lisuke likwenye indawo. Siyafisa ukuthi le nkinga ilungiseke nathi sikwazi ukuthola amanzi,” kubeka elinye ilungu lo mphakathi elingathandanga kudalulwe igama lalo.
Ikhansela lakwa-ward 4 okubalwa khona izindawo ezifana neHenley naKwaMnyandu uMnuz Mlungisi Zondi uthe ngeke aze asho ukuthi kukhona inkinga yamanzi kule ndawo kwazise amaloli athutha amanzi afika zonke izinsuku elethe amanzi.
Uthe into eyenza ukuthi abantu abahlala eHenley bagcine sebelethelwa amanzi ingoba ithangi eliKwaMnyandu okumele ngabe lihlinzeka abantu ngamanzi alisakwazi ngoba isibalo sabantusesande kakhulu.
“Amaloli aletha amanzi kule ndawo afika ngisho kuyiSonto ezohlinzeka umphakathi. Aze aphoqeleke ukuba athuthe amalodi amabili njalo ngosuku kodwa inkinga ekhona ukuthi ngeke aze akwazi ukuhambela indawo yaseHenley yonke ngosuku olulodwa kodwa ayashintshanisa ukuthi uma ekade ekwelinye uhlangothi namhlanje ngosuku olulandela aye kolunye uhlangothi.
“Ithangi leli ekumele engabe ilona eliphakela abantu abaseHenley amanzi selivele lali ncane kakhulu kwazise sekukhona nenye indawo entsha ebizwa ngokuthi iseMbiza eyiphakelayo nokuyindawo efana neHenley,” kubeka yena.
Uqhube wathi nakuba befisa ukuthi balekelele ekutheni ompompi bakulezi zindawo baphume amanzi inkinga isekutheni indawo yase Henley iphethwe Umngeni yingakho kunzima ukuthi ithuthukiswe.